ကာမအလှူ ( ၂၀၁၃ ) : Super Sex Bug ဆူပါပိုး အစိုးရိမ်မကြီးပါနဲ့
Super Sex Bug ဆူပါပိုး အစိုးရိမ်မကြီးပါနဲ့
New sex superbug could be global killer "(ဆူပါဘဂ်) သစ်ဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ သေစေလာက်အောင် ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်" ဆိုတဲ့သတင်းကို ၁-၅-၂ဝ၁၃ နေ့က “ဆန်း” သတင်းစာမှာ စပြီးရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒိနောက်မှာ Sex Superbug could be worse than AIDS "(အေအိုင်ဒီအက်စ်) ထက်ဆိုးတဲ့ (ဆူပါဘဂ်)" ဆိုတဲ့သတင်းကို ၂-၅-၂ဝ၁၃ နေ့က CNBC ကနေရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒိနောက်မှာ Worse than AIDS - sex superbug discovered in Japan "(အေအိုင်ဒီအကစ်) ထက်ဆိုးတဲ့ လိင် (ဆူပါဘဂ်) ဂျပန်မှာတွေ့တယ်" လို့ ၆-၅-၂ဝ၁၃ နေ့မှာ ထပ်ထွက်လာပါတယ်။ မြန်မာ့သတင်းလောကထဲလဲ ရောက်လာပါပြီ၊ MRTV4ကနေ ၁၈-၅-၂ဝ၁၃ မှာ တင်ဆက်သွားပါတယ်။
HIV ပိုးက ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပြီး ဒီပိုးသစ် “Super Sex Bug” ဆိုတာက ဗက်တီးရီးယားဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်တာမြန်လွန်းလို့ ပိုဆိုးတာပါ။ ပိုးနာမည်ကတော့ HO41 ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ ကတည်းက ဂျပန်မှာ လိင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ ၃၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးဆီကနေ စတွေ့ထားတာပါ။ ဒိနောက် ပိုးဟာ ဟာဝိုင်ယီကို ၂ဝ၁၁ ထဲမှာ ရောက်ပါတယ်။ HO41 ပိုးဟာ ပဋိဇီဝဆေးတွေမှန်သမျှ မတိုးလို့ဆိုးတာလဲပါတယ်။
တိတိကျကျပြောရရင် HO-41 ကို ၁၂-၇-၂ဝ၁၁ နေ့မှာ ကနေဒါနိုင်ငံ ကွိဘက်မှာ ၄ ရက်တာကျင်းပတဲ့ International Society for Sexually Transmitted Disease Research (ISSTDR) နိုင်ငံတကာ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါများ အသိုင်းအဝိုင်းကွန်ဖရင့်အပြီးမှာ ထုတ်ဖေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်က ဒီပိုးဟာ ဂနိုးရီးယား (ဆီးပူညောင်းကျ) ရောဂါပိုးသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးကူးစက်တာခံရရင် ရှော့ခ် ရမယ်။ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ သေနိုင်တယ်။ ပိုးရှိနေပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၅ဝ%၊ အမျိုးသားတွေမှာ ၂-၅% ရောဂါလက္ခဏာ မပြဘဲရှိတတ်လို့ ကာကွယ်ရေးလုပ်ရတာ ခက်ပါတယ်။ ဂနိုးရီးယားပိုးက ဆေးယဉ်တာတွေ များများလာတာ အမှန်ဖြစ်တယ်။ Ceftriaxone ထိုးဆေးကို တခြားဆေးနဲ့ တွဲသုံးလာရတယ်။ Azithromycin ဒါမှမဟုတ် Doxycycline ပေးလေ့ရှိတယ်။ (ကွန်ဒွမ်) ကို စနစ်တကျ သုံးတာနဲ့ အတော်များများကာကွယ်နိုင်တယ်။ “လိုက်နာနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးနည်းက လိင်မဆက်ဆံပါနဲ့။”
Superbugs ဆူပါဘဂ်အဆင့်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ဆေးမတိုးတဲ့ပိုးပေါင်း (၆) မျိုးရှိပါတယ်။
1. Klebsiella pneumonia နူမိုးနီးယားဖြစ်စေတဲ့ပိုး၊
2. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus အနာဖြစ်စေတဲ့ပိုး၊
3. Clostridium difficile လေမကြိုက်တဲ့ အခွံနဲ့နေတဲ့ပိုး၊
4. Extensively Drug Resistant Tuberculosis တီဘီ၊
5. Drug-resistant Gonorrhea ဆေးမတိုးတဲ့ ဂနိုးရီးယား နဲ့
6. Shiga toxin-producing Escherichia coli အဆိပ်ထွက်စေတဲ့ (အီး-ကိုလိုင်) ပိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကားမှာ STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ခံရသူပေါင်း တနှစ်မှာ သန်း ၂ဝ ရှိတယ်။ ဂနိုးရီးယားလူနာ ၇ သိန်းပါတယ်။ ဆေးကုသစရိတ်က ၁၆ ဘီလျန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှာ ဒီပိုးကို တိုက်ဖျက်ဘို့အတွက် ဒေါ်လာ ၅၄ သန်း တောင်းလိုက်ပါသတဲ့။
တချို့မီဒီယာသမားတွေက (ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာသာ မဟုတ်ပါ) ဖတ်တဲ့သူ မျက်လုံးပြူးစေမှာမျိုးကို တင်ချင်တဲ့ ဝါသနာ ရှိကြတယ်။ ဆေးသုတေသနသစ်တွေကို သတင်းစာ၊ သတင်းဌာနကြီးတိုင်းကနေ နေ့တိုင်းတင်ပေးနေတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ “သုတေသနဆိုတိုင်း မကိုင်းရှိုင်းပါနဲ့” လို့ စာလေးတပုဒ်ရေးထားရတယ်။ ခေါင်းစဉ်လေးသာဖတ်ပြီး စိတ်ပျက်စရာ၊ အားတက်စရာတွေဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အခုမှစတွေ့တိုင်း လက်တွေ့နယ်မှာ အသုံးမကျသေးပါ။
မဆိုးတဲ့သတင်းကိုလဲ သိထားပါ။ AIDS ထက်ဆိုးတယ်လို့ တခြားဆရာဝန်တွေက လက်မခံပါ။ ခုထိတော့ ဒီပိုးကနေ သေတယ်လို့ သတင်းမထွက်သေးပါ။ ဟာဝိုင်ယီ၊ ကာလီဖိုးနီးယားနဲ့ နော်ဝေမှာ ဆင်တာတာတွေ တွေ့ပေမဲ့ လူနာတွေကို ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ နိုင်အောင်ကုနိုင်ထားတာမို့ ပိုးဟာ ဂျပန်မှာသာရှိသေးတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ နယူးယော့ခ်က ဒေါက်တာ (ဘရုစ် ဟာ့ရှ်) ကလက်မခံပါ။ ပိုးဝင်လို့ (ရှော့ခ်) ရပြီး သေနိုင်ပေမဲ့ ၁% သာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ AIDS မှာဆိုရင် ၉၈% သေနိုင်တယ်။ ခိုင်းနှိုင်းမှုလွန်ကဲလွန်းပါသတဲ့။
ကာမအလှူ ( ၂၀၁၃ ) သွန်း ဆက် at 3:03 AM